तीज सकिदा पनि घटेन सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोवार ? - Everest Dainik - News from Nepal
तीज सकिदा पनि घटेन सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोवार ?
काठमाडौं : तीज सकिदा पनि सुनको मूल्य घटेको छैन । केही दिन पहिले घटेको सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार ५ सय तोकेको छ । मंगलबार छापावल सुनको मूल्य प्रतितोला ७२ हजार ५ सय थियो ।
त्यस्तै, मंगलबार ७२ हजार २ सय रहेको तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा ४५ रुपैयाँले बढेर ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदीको प्रतितोला मूल्य ८९५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
सुनको मूल्य बढ्नेक्रम नरोकिएपछि बिक्री ठप्प भएको सुनचाँदी व्यवसायीको गुनासो छ ।